SundaySermons.online: "ကောင်းပေသည်၊ ၀ိညာဉ်ဖို့" ဓမ္မသီချင်း၏ ရာဇ၀င်
သီချင်းစာသား -ဟိုရတီယို၊ ဂျီ၊ စပပ်ဖို့ဒ် ၁၈၂၈-၁၈၈၈
တေးရေး -ဖိလစ်၊ ပီ၊ ဘလီးစ် ၁၈၃၈-၁၈၇၆
“ဘုရား သခင်သည် ငါတို့ ခိုလှုံရာ ဖြစ်၍၊ ခွန်အားကို ပေးတော်မူ၏။ ဘေးရောက်သည် ကာလ အထူးသဖြင့် ကူမတော် မူကြောင်း ထင်ရှား လျက်ရှိ၏။” (ဆာလံ၊၄၆း၁)။
ဤ ဓမ္မသီချင်းကို ၁၈၂၈ ခု အောက်တိုဘာ (၂၀) ရက် နေ့တွင် နယူးယောက်မြို့၏ နော့သ်ထဂွိုင်း၌ မွေးဖွားသည့် ဟိုရထီယို၊ ဂျီ၊ စပပ်ဖို့ဒ်ဟု ခေါ်သော ချီကာဂိုမြို့မှ ပရက်စ် ဘီတီးရီးယန်း သာမန် အသင်းသား တစ်ယောက်က ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ လူငယ် တစ်ယောက် ဖြစ်စဉ်တွင် စပပ်ဖို့ဒ်သည် တရားဝင် လုပ်ငန်း တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း၌ အောင်မြင်ခြင်းနှင့် တကွ ခရစ်ယာန် လှုပ်ရှားမှု၌ အလွန်စိတ်အား ထက်သန်သည်။ သူသည် D.L. Moody နှင့် ထိုခေတ်ကာလက ဧဝံဂေလိ ဦးဆောင်သူ များနှင့် နီးနီး ကပ်ကပ် ဆက်ဆံ ပေါင်းသင်းခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက် သည်။ သူအား နာမည် ကြော်ကြားသော ဧဝံဂေလိ ဂီတ ပညာရှင် စတက်ပ်ပင်းက “ထူးဆန်းသော ဥာဏ်ပညာ ရှိသူ၊ ရည်မွန်သော ပုဂ္ဂိုလ်၊ နက်နဲစွာ ဝိညာဉ် သဘောရှိ သောသူ၊ သမ္မာကျမ်း၌ ဆည်းကပ် သောသူ” အဖြစ် ဖော်ကျူး ထားသည်။
၁၈၇၁ ခုနှစ် ချီကာဂိုမြို့ မီးလောင်ရန် လပိုင်း အလိုတွင် စပပ်ဖို့ဒ်သည် မစ်ရှီဂန်အိုင် ကမ်းခြေရှိ မြေကွက်၌ အရင်း အနှီးကို တစ်လုံး တစ်ခဲ မြှပ်နှံသည်။ သူပိုင်ဆိုင် ထားသမျှ အရာ အားလုံး တို့ကို ဤဘေး ဒုက္ခကြီးက ဖယ်ရှား သုတ်သင် လိုက်သည်။ သူ၏ ဇနီးနှင့် သမီး လေးယောက် အနား ယူရန်နှင့် ဂရိတ် ဗြိတိန်၌ ကျင်းပသော မူးဒီနှင့် စိန်ကီတို့၏ တရားဟောပွဲ တစ်ခုကို မစရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စပပ်ဖို့ဒ်က ၁၈၇၃ ခုနှစ် နှီဝင်ဘာလတွင် ဥရောပသို့ မိသားစု ခရီးသွားရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။ မမျှော်လင့်သော လုပ်ငန်း တိုးတတ်မှုကြောင့် သူသည် ချီကာဂို၌ ကျန်ရစ်ခဲ့ရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သူ၏ ဇနီးနှင့် သမီးတို့ကို S.S. Ville du Havre သင်္ဘော ခရီးစဉ်၌ ထည့်လိုက်သည်။ မကြာမီ သူလိုက် လာရန် မျှော်လင့်သည်။ နိုဝင်ဘာ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ထို သင်္ဘောကို အင်္ဂလိပ် ကုန်တင် သင်္ဘောကြီး Lochearn က တိုက်လိုက်ရာ (၁၂) မိနစ် အတွင်း၌ နစ်မြုတ်သွားသည်။ ရက်ပေါင်းအတော် အတန်ကြာသောအခါ မသေဘဲ အသက်ရှင် ကျန်ကြွင်းသော သူတို့သည် ဝေလနယ် ကာဒစ်သို့ ကမ်းပေါ်တတ်လာကြပြီး ဇနီး ဖြစ်သူ မစ္စ မပပ်ဖို့ဒ်သည် သူမ၏ ခင်ပွန်း သည်အား “တစ်ယောက်တည်းလွတ်သည်” ဟု ကြေးနန်း ရိုက်လိုက်သည်။ မကြာမီပှာ စပပ်ဖို့ဒ်သည်
သူ့ ဇနီးထံ သွားရန် သင်္ဘောနှင့် ထွက်ခွာလာသည်။ သူ၏ သမီးများ ရေနစ်သော နေရာအနီးသို့ ရောက်သော အခါ စပပ်ဖို့ဒ်သည် ဤသီချင်း စာသားကို ရေးလိုက်သည်။ “၀မ်းနည်းခြင်း ပင်လယ်လှိုင်း လိမ့်လို”ဟူသော သူ၏ စကားလုံး တို့သည် သူ၏ ၀မ်းနည်းခြင်းကို အဓိပ္ပါယ် နက်နဲစွာ ဖော်ပြသည်။ စပပ်ဖို့ဒ်၏ သီချင်းသည် အသက်တာ ၀မ်းနည်းခြင်းနှင့် စုံစမ်း နှောင့်ယှက်ခြင်းကို ပဓာန ပြောလိုခြင်း မဟုတ်ဘဲ တတိယ အပိုဒ်တွင် ခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်း အလုပ်နှင့် စတုတ္တ အပိုဒ်တွင် သူ၏ ဘုန်းကြီးသော ဒုတိယ အကြိမ် ကြွလာခြင်းကို ပို၍ အာရုံစူးစိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကို မှတ်သား ဖွယ်ရာ ကောင်းပါသည်။ လူ့အနေနှင့် ပြောရလျှင် စပပ်ဖို့ဒ်သည် ထိုသို့သော ဝမ်းနည်းစရာနှင့် ကြေကွဲခြင်းကို ခံစားရသော်လည်း “ဝိညာဉ်ဖို့ ကောင်းပေသည်” ဟုပြော နိုင်သည်မှာ အံ့သြ စရာကောင်း လှပေသည်။
၁၈၈၁ ခုနှစ်တွင် စပပ်ဖို့ဒ် သည် တစ်သက်လုံး တောင့်တသော သန့်ရှင်းသောမြေ (Holy Land)သို့ ရောက်ခဲ့သည်။ သမီးငယ် နှစ်ယောက်၊ မိတ်ဆွေ အချို့နှင့် အတူ ချီကာဂိုမှ ထွက်လာကြပြီး ယေရုရှလင်မြို့၌ တည်းခို ကြသည်။ ထိုနေရာ၌ သူတို့သည် ဖျားနာသော သူများနှင့် ခိုကိုးရာ မဲ့သူများကို စောင့်ရှောက်သည့် အမေရိကန် ကိုလိုနီကို တည်ထောင် ကြသည်။ စပပ်ဖို့ဒ်သည် အသက် ခြေက်ဆယ် အရွယ်တွင် ကွယ်လွန် သော်လည်း အဓိပ္ပါယ် ရှိလှသော လုပ်ငန်း များကို ကျန်ရစ်သူ မိသားစုက ဆက်လက် လုပ်ဆောင် ကြရသည်။ ဤ ထူးခြားသည့် မိသားစု အကြောင်းနှင့် သူတို့၏ အမှုတော် လုပ်ငန်းကို စပပ်ဖို့ဒ်၏ သမီးဖြစ်သည့် Bertha Spafford Vesper ရေးသားသော Our Jerusalem စာအုပ်၌ ဖော်ပြထားသည်။
ဖိလစ်၊ ပီ၊ ဘလီးစ်သည် ထို အတွေ့ အကြုံနှင့် စပပ်ဖို့ဒ်၏ သီချင်း စာသားကို အလွန် စိတ်ဝင်စား လွန်းသောကြောင့် မကြာမီတွင် ၄င်းအတွက်သံစဉ်ကို ရေးစပ်ကာ Sankey နှင့် ဘလီးစ်တို့၏ ဓမ္မ သီချင်း စာအုပ် ဖြစ်သော Gospel Hymns No. Tow ကို ၁၈၇၆ ခုနှစ်၌ ပထမ ဦးဆုံး ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေသည်။ ဘလီးစ် သည် ဧဝံဂေလိ သီချင်း များစွာတို့ကို သူ၏ တိုတောင်းသော အသက်တာ၌ ရေးသားခဲ့သည်။ သူသည် စာသားနှင့် သံစဉ် နှစ်ခု စလုံးကို အများအားဖြင့် ရေးသား စပ်ဆိုသည်။ စောစောပိုင်း ဧဝံဂေလိ သီချင်းများ ကဲ့သို့ သူ၏ သီချင်းတို့သည် အလွယ်တကူ သိနိုင်ပြီး သီဆိုနိုင်သည်။
ဖိလစ်၊ ပီ၊ ဘလီးစ် ရေးသားသော အခြား ဓမ္မသီချင်း တို့တွင် “ရပ်တန့် ကုန်လော့”(Hold the Fort)၊ “ငါသည် သင်၏ အတွက် သေသည်” (I Gave My Lief for Thee)၊ “ငါ့ကိုပင် ချစ်သည်” (Jesus Loves Even ME)နှင့် “သင်၏ မှိန်သော မီးခွက်ပြင်လေ” (Let The Lower Lights Be Burning) နှင့် “Once For All” စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
ရေးသားတင်ပြသူ Unknown at 3:20 AM